ပိုမို ထိရောက်တဲ့ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေမှု အတွက် သတိပြုဖွယ် အချက်ကလေးများ
ဟောဒါကတော့ သင့်ရဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က အလုပ်ရှာဖွေမှုကို ပိုမို ထိရောက်စေဖို့ အချက်ကလေးတွေပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေက HotJobs.com ရဲ့ Vice President Daryl Hulme နဲ့ အလုပ် ရှာဖွေဆက်သွယ်မှု ကျွမ်းကျင်သူ Barbara Nixon တို့ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
* သွက်လက်မြန်ဆန်ပါစေ --- အလုပ်ခေါ်စာများကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ တုံ့ပြန်ပါ။ အခုလက်ရှိ ခေတ်ကာလမှာ အလုပ်ရှင်တွေက အလုပ်သမား ခန့်အပ်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို တော်တော်လေးကို မြန်မြန် ဆုံးဖြတ်နေကြပါပြီ။
* Interview ကို တိုက်ရိုက်ဝင်ခြင်းထက် Application ပေးပို့မှုကို ဦးစွာ ဆောင်ရွက်ပါ--- ထိရောက်ပါစေ။
* Online ပေါ်က အလုပ်ခေါ်စာရဲ့ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။ အလုပ်ရှင်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို သေသေချာချာ လေ့လာမှုပြုပါ။
* Online ပေါ်မှ အလုပ်ရှာဖွေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အလုပ်ခန့်ထားသူများ ဖော်ပြတဲ့ သင့်ရဲ့ အခွင့်အလမ်းကို တိုးမြင့်စေမည့် စကားလုံးများ သင့် Resume မှာ ပါဝင်ပါစေ။ စာလုံးပေါင်း မှန်ကန် တိကျပါစေ။ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး Program တွေက စာလုံးပေါင်း မမှန်တဲ့ စကားလုံးများကို ရှာဖွေပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
* ခေါ်ယူသော ရာထူးနှင့် လျှောက်ထားသူ ကိုက်ညီမှု ရှိကြောင်း သင့်ရဲ့ Resume မှာ ဖော်ပြပါ။ ခေါ်ယူတဲ့ အလုပ်ရာထူးနှငိ့ သင့် ကျွမ်းကျင်မှု၊ ပညာအရည်အချင်း ဆက်စပ်မှုအား ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြပါ။
* သင့် အလုပ်ရာဇ၀င်အကြောင်း တိကျမှုရှိပါစေ။
* အဖွဲ့အစည်းပုံစံ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် အံဝင်မှုရှိအောင် မျှော်လင့်ပါ။ သင်က ပုံစံစနစ်ကျတဲ့ မိမိ မျှော်လင့်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လုပ်ကိုင်ချင်ပေမဲ့လို့ အလုပ်ရှင်ဖက်က ရှုပ်ထွေးထွေပြားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြုပြင် ပြောင်းလွယ်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ သူကို ခန့်အပ်ဖို့ လိုနေတယ် ဆိုရင် အံဝင် ခွင်ကျမှု ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
* သက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာသည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါ။ ဦးဆုံး အထင်ကြီး လေးစားမှု ရဖို့ သင့်မှာ သည် အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။
* အလွန်တရာမှ ရှည်လျား ရှုပ်ထွေးသော Resume အမှားများ ရှောင်ကြည်ပါ။ ( အရပ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်၊ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ၊ လိင်၊ အိမ်ထောင်ရေး အခြေအနေ၊ သားသမီး အရေအတွက်၊ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ၊ လူမျိုး ၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ ယခင်ရာထူးများမှ ထွက်ခဲ့သည့် အကြောင်းရင်း၊ ဓာတ်ပုံ၊နှငိ့ လစာငွေ ရာဇ၀င် အစရှိသည်များ)
Feel free to visit my site: elgg.tronicsis.com
Feel free to visit my homepage; Digitalxportal.net
my site ... HTTP://www.jiafenz.com.tw/node/19956
in the beginning, did not work perfectly with
me after some time. Someplace throughout the sentences
you actually were able to make meabeliever unfortunately only forashort
while. I nevertheless haveaproblem with your jumps in logic and you might
do well to fill in all those gaps. When you actually can accomplish that, I would surely end up
Here is my web blog ... http://www.mtwebit.com/
Review my web site :: lovelybbws.com
စင်္ကာပူက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲ မြင်ကွင်...
စင်္ကာပူ တိုပါးယိုး သင်္ကြန်ပုံရိပ်များ
အွန်လိုင်းပေါ်မှ အလုပ်ရှာဖွေမှု : သင့် အားထုတ်မှု ထိေ...